बहस – Page 10 – TajaNepal
सर्वोच्चमा फेरि उस्तै
काठमाडौँ । संसद्को सुनुवाइ समितिले शैक्षिक योग्यताको यथोचित प्रमाण दिन नसकेकाले दीपकराज जोशीको नाम यस पटक पनि सिफारिस गर्न न्यायपरिषद् बाध्य भएको हो । जोशी सर्वोच्चमा वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् । चोलेन्द्रसमशेर जबरा शुद्ध जोशी र…
ईश्वरी वाग्ले सरकारले ठूलो तामझामका बीचमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । श्रमसँग जोडिएको यो विषयलाई हल्कारूपमा लिइयो भने यो प्रचारको अर्थ छैन । सरकारको पैसा खर्च नगरी गरिएको व्यापक प्रचार मात्र ठूलो इस्यू…
क्रिश्चियन धर्मगुरुको नाममा अत्याचार !
काठमाडौँ । कुनै प्नि धर्म शास्त्रअनुसार अपराधी र भ्रष्टहरूलाई पवित्र बनाउने प्राकृतिक नियम छन् । धर्म र शिक्षा गुरु जीवनभर सदाचारी र पवित्र हुनुपर्छ । कुनै पनि विवाहित सन्तान जन्माउने र अपराध कर्मका नायक प्राकृतिक…
आयुक्तहरूको ध्यान कमाउनतिरै ! काठमाडौँ । जनताको सामना गर्नुनपर्ने तत्कालीन शाही परिवारको रेखदेखबाट जागिरे बनेका लोकमानसिंह कार्कीलाई काँध थाप्ने काँग्रेसका महेश आचार्य र डा. रामशरण महतलाई त्यो बेला थक्क लाग्यो, जुन बेला शाही शासनको अख्तियारमा…
यो पदको गरिमा कसले राख्ला ?
काठमाडौँ । यो मुलुकमा गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई पचाउन नसक्ने जमात छ । सरकार भने परिवर्तन चाहनेकै नेतृत्वमा छ । त्यो सरकारले जनता र राष्ट्रको गरिमा राखोस् न सेवा दिएको होस् । त्यही कारण संवैधानिक राष्ट्रपतिमाथि…
सर्वत्र विरोध भएपछि झस्किए ओली !
काठमाडौँ । जनआकांक्षा विपरीत दुई तिहाइको हुङ्कारमा रमाएको नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिनाको समय खेर फालेको छ । यो अवधिमा मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउनुपथ्र्यो तर मन्त्री कमाउनमै व्यस्त रहे । उतिका नाममा सरकारले…